गायिका अञ्जु पन्तको बिहे पछी नायिका रीमा विश्वकर्माको दोस्रो विवाह तय, को हुन् हुनेवाला बेहुला ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारगायिका अञ्जु पन्तको बिहे पछी नायिका रीमा विश्वकर्माको दोस्रो विवाह तय, को हुन् हुनेवाला बेहुला ?
नायिका विश्वकर्माले आफ्नो बिहेको कुरा गर्ने बेला भैसकेको तर्क गर्नुभयो । तर, उहाँले दोश्रो बिहेको योजनाको बिषयमा भने केही पनि बताउन मान्नु भएन् । अभिनेत्री रीमाले आफूलाई ‘अर्थपूर्ण सम्बन्ध’ मनपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।कोही पनि पूर्ण रुपमा ठिक नहुने भन्दै उहाँले कहिलेकाही कमजोर महशुश गरिरहेको बेलामा साथ दिने साथीको आवश्यकता भएको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँको विचारमा यही नै अर्थपूर्ण सम्बन्ध हो । आफुले एकपटक बिहे गरेर सबै कुरा थाहा पाइसकेँको भन्दै आफ्ना लागि बिहे महत्वपूर्ण नभएको तर्क व्यक्त गर्नुभयो । अर्को बिहे आफ्नो कहिले गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो इच्छामा भर पर्ने पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।जनबोली